Soddon sano ka dib kooxda liverpool waa horyaalka koobka ingriiska - Tilmaan Media
Liverpool oo xilligan ah horyaalka aduunka maadaama ay ku guulaystay koobka kooxaha aduunka, koobka horyaalada Yurub waxay sidoo kale caawa noqotay horyaalka Ingiriiska, wallow guushaas ku naaloonaysay Liverpool waxaa u ahaa yoolka koowaad koobka Primer League-ga oo aanay waligeed qaadan tan iyo markii magacan loo badalay 1993-kii.
Liverpool ayaa hadda waxay xooggaa saaraysaa inay hesho dhibco ka badan 100-kii dhiboocd ee Manchester City horyaalka ku qaaday sanad ka hor, waana kooxda dhibcaha ugu badan ku qaaday koobka.
Ciidanka tababare Klopp ayaa soo bandhigay mid ka mid ah hannaan ciyaareedkii ugu xusuustaa Premier League, waxay 86 dhibcood ka urursadeen 28 guul oo ay heleen, laba dhibic oo barbardhac ah, iyagoo hal mar oo kaliya laga badiyey 31 ciyaar.
Liverpool wallow aanay horyaalka Ingiriiska ku qaadan 30 sano haddana waxay ku guuleysteen muddadaas saddex FA cup, afar koobka League cup-ka, Uefa Cup, laba mar oo Champions League-ga ah, saddex mar Super Cup iyo hal mar koobka kooxaha aduunka.
Tababaraha reer Jarmal ayaa Liverpool qabtay October 2015-tii iyadoo kooxdu ku jirtay kaalinta 10-aad, waxaana ay caawa uu u qaaday horyaalka Ingiriiska.